बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको सेवा बन्द « risingsunkhabar
बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको सेवा बन्द
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७८, मंगलवार ०५:०५
लहान । उपचाररत एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सिरहा जिल्ला अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ ।
अस्पतालमा उपचारका लागि गत आइतबार भर्ना भएकी एक महिलामा जाँचपछि कोरोनासंक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिएकोे हो ।
संक्रमण पछि उक्त महिलाको सम्पर्कमा आएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकसमेत रहेकाले तत्काललाई अस्पताल शिल गरी आकस्मिक सेवा मात्र संचालन गरिएको अस्पतालका मेसु डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाहेक सबै कक्षमा ताल्चा लगाइएको छ । अस्पतालमा रोग निवारक औषधि छर्केपछि पुनः संचालनमा ल्याइने मेसु डा. यादवले बताउनुभयो ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ आवतजावत हुने सम्पूर्ण नाकामा कडाइ गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका साथै नेपाल प्रहरीलाई समेत निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । हाल सिरहामा एक महिलासहित सात जना सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेको बताइएको छ ।
गायक तथा सामाजिक अभियानकर्मी गुरुशरण सदाको निधन भएको छ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–६ का ३३ वर्षीय सदाको सोमबार साँझ निधन भएको हो । लामो समयदेखि सामाजिक तथा सङ्गीत क्षेत्रमा क्रियाशील सदाको निधन भएको छ । पछिल्लो तीन / चार दिनदेखि बान्ता हुने, उच्च ज्वरो आउने र पेट दुख्ने समस्याले पीडित सदाको निधन भएको मृतकका जेठान अरुण सदाले जानकारी दिनुभयो ।
अचानक बेहोस भएका उहाँलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि गोलबजारस्थित भूमिजा हस्पिटलमा ल्याएका थिए । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि धरान लाने क्रममा लहान पुग्दानपुग्दै उहाँको बाटोमै निधन भएको परिवारजनले जनाएका छन् । उहाँ सेभ द चिल्ड्रन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काठमाडौं कार्यालयमा बसेर काम गर्दै आउनुभएको थियो ।
केही दिनअघि मात्र आमाको वार्षिक श्राद्धका लागि घर आउनुभएका सदा जातीय सुधारका लागि सवरी संकल्प नामक संस्थाको माध्यमबाट सामाजिक काममा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै उहाँकी श्रीमती शान्ति सदा पनि सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय रहनुभएको थियो ।
सदा दम्पतीका दर्जन बढी मैथली तथा नेपाली गीतको लेखन, गायन र आफैँले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।